Kubada Koleyga Horseed – Horseed Sports Club
Ciyaar saaxiibtinimo oo galab-nimadii shalay ka dhacday magaalada Stockholm ee xarunta dalka Sweden ayey isku hardiyeen ciyaartooyda xeegada barafka xulka Soomaalida reer Borlänge iyo xul ka socday magaalada Stockholm. Halkaasina oo ay guushii ku raacday reer Stockholm oo ku guuleeystay 8:1. Ciyaari waa gelin dambe ayey ku hamiyeem ciyaartooydii soomaalida ee ka socotay Borlänge. Ciyaartan
Man United iyo Chelsea oo isku heesta xidig u dheela Kooxda AC Milan
Kooxaha Horyaalak dalka England ee kala ah Man United iyo Chelsea ayaa Waxa ay £46.5m ku baadi Gobayaan Weeraryahanka kooxda AC Milan ee Carlos Bacca. Carlos Bacca oo Xiligaan un ku soo biirey AC Milan kadib markii ay Sevilla kaga soo iibsadeen lacag dhan £23.2million ayaa waxa uu soo Jiitey kooxo badan oo yurub ah
Horseed oo galabta soo bandhigtay ciyaar aad u wanaagsan
Kooxaha kubadda cagta ee Horseed iyo Gaadiidka oo galabka kulan ciyaareed ku yeeshay garoonka Banaadir ayaa ku soo dhamaatay 2-0 oo ay ku badisay kooxda Gaadiidka. Kulanka oo ahaa kii 23-aad ee 23-aad ee horyalka ayaa qaybta hore ee cayarta lagu kala nastay 0-0, basle marki laysku soo laabtay waxaa 2 gool dhaliysay kooxda Gaadiidka. Kooxda kubadda
Naadiyada Horseed iyo Jeenyo oo galabta isku arki doona Banaadir Stadium
Garoonka Banaadir Stadium waxaa galabta ku kulmi doona Kooxaha Jeenyo iyo Horseed oo ah laba naadi oo aad ugu dagaalamaya horyaalka Soomaaliya. Naaadiga Horseed oo si weyn dib u habayn loogu sameeyay ayaa waxaa ay dhawaac ku guuleysatay labo koob, iyadoo galabta la ciyaareysa naadiga Jeenyo. Gudoomiyaha naadiga Horseed Jeneraal Ceynte ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay